MOE (ခေါ်) ဝီကီမြန်မာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
MOE (ခေါ်) ဝီကီမြန်မာနှင့် စပ်လျဉ်း၍	Posted by mm thinker on November 11, 2008
Posted in: MOE, Wikipedia.	Tagged: MOE, Wikipedia.	(ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဝီကီမြန်မာ @ MOE ဆိုင်ရာ အလုပ်ခွင်ဆွေးနွေးပွဲ (Workshop) အတွက် စည်သူအောင် (ဝီကီတည်ထောင်သူ) ထံမှ တဆင့် ပေးပို့သော ကျနော်၏ အကြံပြုလွှာ)
(၃) အင်တာနက်၊ စာအုပ်စာပေတွေနဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့ မီဒီယာစာနယ်ဇင်းတွေ အနေနဲ့ရော၊ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ပါ မိမိတို့ မီဒီယာတိုက်အကြောင်း၊ မိမိလေ့လာသော ဘာသာရပ်အကြောင်းကို အနည်းဆုံးအားဖြင့် စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်ပြီး ရေးကြမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်က တစ်ရာ အများကြီး ဒေတာတွေ စုံလာနိုင်မှာပါ။ (၄) မြန်မာဘာသာနဲ့ မြန်မာလို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုကိုးကားဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဝီကီမြန်မာကို “မြန်မာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး အားလုံးအတွက်၊ နောက်မျိုးဆက်များအတွက်”လို့ တူညီတဲ့ ဘုံသဘောထားတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်အောင် ကြိုးပမ်းကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့ စေတနာ၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို ပုံပေးထားသော်လည်း ကျနော်တို့မှာ ဆာဗာဝယ်ယူရေး အသေးအဖွဲငွေကြေးကအစ နောက်ဆုံး စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှန်ကန်ရေးအထိ အကုန်လိုအပ်နေဆဲပါ။
← ခေတ်အမျိုးမျိုးမှ မြန်မာဟာသစာပေ (၂)	ချစ်စွာသော မိန်းကလေးသို့ →	Pages	about
Myanmar Sar	Blog Stats	254,649 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Createafree website or blog at WordPress.com.